चाडपर्वमा खानपान कसरी गर्ने? :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
चाडपर्व भन्ने वित्तिकै मिठो खाने, राम्रो लगाउने, साथीभाई भेट्ने र मिठा खानेकुरा खाने गरिन्छ। पर्वहरुमा हामी मासुका धेरै परिकार प्रयोग गर्छौं। संसारभर माछा, मासु, अन्डा र दुग्ध पदार्थलाई पोषिलो आहारका रुपमा प्रयोग गरिन्छ। शरीरलाई चाहिने प्रोटिनको श्रोतका रुपमा मासुलाई लिइन्छ। प्रोटिनले शरीर निर्माणमा मद्धत गर्छ। मासुमा प्रोटिन त पाइन्छ तर पाचन प्रक्रियालाई चाहिने रेशेदार छोक्राबोक्रा नहुने र बोसो बढी हुने भएकाले पच्न गाह्रो हुन्छ। परिणामः कब्जियत हुन्छ। अर्को कुरा मासु पच्न धेरै समय लाग्छ र मासु खाँदा शरीरमा भारीपन आई आलश्य बनाउँछ। त्यसैले मासु खानै पर्ने पनि होइन र नखाई नहुने पनि होइन।
हाल संसारभर मासुको प्रयोग भइरहेको छ। स्वास्थ्यका हिसाबले मासु नखाने बाटोमा लाग्नु उपयुक्त हुन्छ तर खानै परे पनि प्रशस्त हरियो सागसब्जी, गाजर, फलफुलसंग मिलाएर खाँदा जति हानी गर्ने हो त्यसबाट बच्न भने सकिन्छ। मासु खाँदा सागसब्जी र सलाद गाजर, फलफुल पनि त्यत्तिकै मात्रामा चाहिन्छ। तर हाम्रो समाजमा भान्छामा मासु पाकेका बेला सागसब्जी र सलादको प्रयोग कम गरेको पाइन्छ अथवा प्रयोग नै गरिँदैन। जसले गर्दा धेरै स्वास्थ्य समस्या आउँछन्। त्यसैले मासु किन्ने बेला सँगै ताजा तरकारी र फलफुल पनि प्रसस्त किन्ने बानी बसालौं। चाडपर्वमा पनि सागसब्जी र सलादको मात्रा बढाऔं। अरुलाई पनि सागसब्जी र सलाद प्रयोगमा प्रेरित गरौं।
तीन बराबर आहार शुत्रका प्रणेता
[caption id="attachment_91763" align="alignleft" width="300"] डा. उमेश श्रेष्ठ[/caption]
डा. उमेश श्रेष्ठ प्रकृतिप्रेमी समूहका सस्थापक हुनुहुन्छ। उहाँ नै तीन बराबर आहार शुत्रका प्रणेता हुनुहुन्छ। स्वस्थ्य र निरोगी रहन प्रकृतिमा सरल विधि छ। त्यो हो– उचित, आहार, विहार र विचार (उआविवि)। मान्छेले जन्मेदेखि नमरेसम्म गर्ने यी तीन चिज हुन्। मान्छेले कि आहार खाने काम गर्छ, कि विहार अर्थात शरीर हल्लाएर गर्ने काम गर्छ कि दिमाग लगाएर सोच्ने (विचार) काम गर्छ। त्यसैले आहार, विहार र विचारलाई उचित गरेर आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै हातमा लिने काम गरे मात्र मान्छे स्वस्थ, निरोगी र आनन्दित रहन सक्छ।
ललितपुरको सातदोबाटोमा रहेको प्रकृतिप्रेमी समूहले यहि सरल पद्धति उआविविमा रहेर सबैलाई आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै हातमा लिन प्रेरित गर्दै मोटोपनदेखि लिएर जीर्ण रोगहरु सुगर, प्रेशर, बाथ, मुुटुरोग आदिबाट मुक्त हुन परामर्श दिँदै आएको छ।
‘हाम्रो शरीर काँचै खान सक्ने क्षमताको हो। पहिला मानिस काँचै खाएर बाँच्थे। पछि हाम्रा पूर्खाले आगोको आबिष्कार गरेपछि पकाएर खाने प्रचलन आएको हो। त्यसैले तीन भागमा एक भाग मात्र भए पनि काँचो सलाद खानु पर्छ’, डा. श्रेष्ठ भन्नु हुन्छ, ‘यसरी एक भाग अन्न, एक भाग हरियो सागसब्जी र एक भाग सलाद मिलाएर खाँदा कब्जियत हुँदैन। र मान्छे निरोगी बन्छ। यही नै प्रकृतिको नियम हो।’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज १०, २०७४, ११:१४:४४